Koox wasiiro ah oo ka tirsan dowladda Lebanon ayaa Sabtida maanta ah ka wada hadlaya khilaafka dublumaasiyadeed ee sii xoogeysanaya ee ka dhex bilowday Lubnaan iyo boqortooyada Sacuudiga, iyadoo ay boqortooyadu erisay safiirkii Lubnaan u fadhiyay dalkaasi, islamarkaana mamnuucday dhammaanba badeecadaha ka yimaada Lubnaan.
Haddii uu Kordahi is casilo, wasiirrada ay taageerto kooxda Xisbullah iyo xisbiga Amal ee ay xulafada yihiin ayaa laga yaabaa in ay iyaguna is-casilaan, xilli dowladda Lubnaan uu cuuryaamiyay muran ku saabsan baaritaanka qarixii weynaa ee August 2020-kii ka dhacay dekedda Beirut.
Ra’iisulwasaare Najib Mikati ayaa fiidnimadii Jimcaha weydiistay Kordahi in uu tixgeliyo “danta qaranka” Lubnaan, isaga oo ku sigtay in uu weydiisto in uu xilka iska casilo.
Kordahi ayaa taageero cad ka helaya Xizbullah, waxaana uu diiday in uu bixiyo raalligelin ama is-casilo hadalka uu jeediyay awgii, taasi oo keentay dhaawicii ugu xumaa ee gaara xiriirka Sacuudiga iyo lubnaan tan iyo 2017-kii xilligaasi oo ay boqortooyadu magaalada Riyadh ku xirtay ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Lubnaan Sacad Al-Hariri.
Xiisadda ayaa halis gelineysa in ay ku baahdo Khaliijka, iyadoo Bahrain ay sidoo kale ka dalbatay safiirka lubnaan in uu dalkeeda ka baxo.
Kuwait ayaa iyana safiirka Lubnaan ee dalkaasi siisay in uu 48 saac gudahood kaga baxo dalkeeda.
Ra’iisulwasaare Mikati ayaa dadaal ugu jiray hagaajinta xiriirka Lubnaan iyo dalalka Khaliijka kaasi oo sanado badan aan hagaagsaneyn saameynta ay kooxda taageerada ka hesha Iran ee Xisbullah ku leedahay dowladda Lubnaan awgeed.